Ozi gbasara Cuba, ị ma ihe ndị a chọrọ ịmata gbasara Cuba? | Njem zuru oke
Ozi banyere Cuba
Mgbe ọ bụla ị na-eche Cuba, lush Okirikiri ala, mara mma osimiri, obi ụtọ na ndị enyi ndị mmadụ, yana omenala na ọdịnala nke Cuba na ọtụtụ n'ime anyị amaworị. Mana ọbụlagodi na ọ bụghị nke mbụ ị na-aga mba Caribbean a, ọ dị mma ka ị gwa onwe gị ma mụtakwuo banyere agwaetiti a mara mma. Ya mere, n'okpuru anyị na-eso ozi gbasara Cuba na ụfọdụ ịmata ihe gbasara Cuba.
1 Eziokwu banyere Cuba
1.1 Akụkọ banyere Cuba
1.2 Mmepe nke Cuba
1.3 Eziokwu ndị ọzọ gbasara Cuba
Eziokwu banyere Cuba
Iji nyochaa na nkenke eziokwu mara nke Cuba, anyị ga-elekwasị anya n'akụkụ ụfọdụ dịka akụkọ ntolite, mmepe na ozi ndị ọzọ gbasara Cuba nke ga-abara gị uru.
Akụkọ banyere Cuba
O nwere ike ị maghị ya, mana aha Cuba bụ "Republic nke Cuba", bụ nke mejupụtara Island nke Cuba, Isla Juventud na ọtụtụ obere agwaetiti.
Ndị njem na-agagharị na-akpọkarị Cuca dị ka "El Caimán" ma ọ bụ "El Cocodrilo", ọ bụ n'ihi na ọ dị ka ọdịdị ya mgbe a na-ele ya anya site na mbara igwe.
N'ihi mgbatị ókèala ya, A na-ahụta Cuba dị ka agwaetiti kachasị ukwuu na Caribbean, ebe ọ bụ na ọ ruru mpaghara 110.860 km².
Ọbụghị naanị nke ahụ, Cuba nwere ihe karịrị nde mmadụ 11, na-eme ka ọ bụrụ agwaetiti nke abụọ kachasị nwee na Caribbean, yana agwaetiti nke iri na isii kachasị ama n'ụwa niile.
Ọzọ nke eziokwu ndị na-akpali mmasị nke Cuba bụ na ndị mbụ biri na ya bụ ndị America Indian a maara dị ka Ciboney. Ha si na South America kwaga, ebe ndị Taíno si Hispaniola bịarute n'oge XNUMX narị afọ AD na Guanajatabey, bụ ndị dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Cuba mgbe ndị Europe bịara.
Christopher Columbus bịarutere n'ụsọ oké osimiri ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Cuba na October 28, 1942, nke dị nso na ebe a maara ugbu a dị ka Bariay, na Mpaghara Hoguín. N'oge ahụ, Columbus kwuru na agwaetiti Cuba maka Alaeze Ọhụrụ nke Spain.
Ọ bụ ezie na enweghị nkwenye banyere nke a, ekwenyere na aha Cuba sitere na asụsụ Taíno. Nsụgharị gị kacha nso nwere ike ịbụ "Ebe ala na-eme nri hiri nne" (cubao) ma obu "nnukwu ebe" (coabana). Ọ kwenyere na Christopher Columbus kpọrọ Cuba aha Ciudad Cuba na Portugal.
Ọ bụ Diego Velázquez de Cuéllar tọrọ ntọala Spanish mbụ na Baracoa n'afọ 1511.
Mmepe nke Cuba
La Habana ọ bụ obodo ndị mmadụ kacha biri na Cuba Ebe ihe karịrị nde abụọ bi na ya, ọ bụkwa ya bụ mmadụ atọ kacha biri na Caribbean. Ọ bụ isi obodo Cuba ma ọ bụ ebe a ka ozu kachasị elu nke steeti na gọọmentị Cuba dị.
N'ihi mmepe nke agwaetiti ahụ dị ka ógbè Spanish, ndị bi na Cuba jụrụ ngwa ngwa, n'ụzọ ka ukwuu n'ihi ọrịa, yana ọnọdụ ọjọọ dị na narị afọ sochirinụ.
E webatara ọtụtụ ndị ohu Africa ka ha rụọ ọrụ na okpete na kọfị. N'ihi ya, Havana ghọrọ mpempe akwụkwọ maka ụgbọ mmiri kwa afọ na akụ ndị na-aga Spain site na Peru na Mexico.
Cuba nọgidere na-achị Spanish ruo 1898, n'agbanyeghị na ndị isi oche ise dị iche iche gbalịrị ịzụta agwaetiti ahụ n'etiti 1845 na 1898. N'ezie, Onye isi ala McKinley nyere $ 300 nde iji zụta Cuba, tupu ndị Amerịka wakporo ya n'oge a na-alụ agha na Spen na Amerịka na 1898.
Cuba nwetara nnwere onwe ya mgbe mmeri nke Spain na Spanish-American War. N'agbanyeghị eziokwu na ekele maka Nkwekọrịta nke Paris, a hapụrụ United States na njikwa nke agwaetiti ahụ dị ka ihe nchebe na Jenụwarị 1899 ma mee ka ikike ya gbatịkwuo ruo 1902.
Eziokwu ndị ọzọ gbasara Cuba
Anyị ga-ejedebe anọ na isiokwu eziokwu mara banyere Cuba nke ị kwesịrị ịma:
N'afọ 1959, Fidel Castro pụtara n ’ebe ahụ dị ka ụzọ dị mkpa nke ndị agha nnupụisi nke ndị mgbanwe ọchịchị Kọmunist nke ga-emesị mee ka ha nwee mmeri. Site n'oge ahụ, gọọmentị aka ike nke Fidel Castro ga-adịgide ruo afọ 50, ruo na February 2008, mgbe a manyere ya ịhapụ ọrụ ya n'ihi nsogbu ahụike.
Onye isi ala nke United States, Dwight David Eisenhower, kwadoro na 1960, atụmatụ nke ndị CIA iji kwado ma zụọ otu ndị gbara ọsọ ndụ Cuban na ebumnuche nke kwatuo ọchịchị Castro. Mwakpo Bay nke Pigs ama ama mere na Eprel 14, 1961. N'oge ahụ, ihe dịka ndị gbara ọsọ ndụ Cuba 1.400 rutere na Bay nke Pigs, agbanyeghị na ha dara na mwakpo ha ịkwatu Gọọmentị.
Na Cuba, ụmụ amaala niile gbara afọ iri na isii na ndị amabeghị ikpe mpụ nwere ike ịtụ vootu. Ntuli aka ikpeazụ emere na Cuba bụ February 16, 3, nhoputa na-esote bụ na 2013.
Raúl Castro, onye na-achị Cuba ugbu a, ekwupụtala na ọ ga-ahapụ ọrụ na 2018, na ngwụcha nke afọ 5 ya ugbu a.
Know maara ihe eziokwu mara nke Cuba Kedụ ihe anyị nwere ike itinye na ihe anyị gwara gị? Gwa anyị gbasara ahụmịhe gị ma nyere anyị aka ịgbasa ozi a gbasara Cuba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ozi banyere Cuba
Cristobal Colon bịarutere Cuba na 1492 ọ bụghị na 1942 hahaha, ekele
Oge TV nke 2019-20 na-akpụzi ka ọ bụrụ nke siri ike yana ọtụtụ afọ agabigaghị. Enwere ọtụtụ azụmahịa dị ịtụnanya, ndị ọkwọ ụgbọelu izizi na-abịa yana naanị dịka ọtụtụ reboots / revivals na ọrụ, kwa. Otú ọ dị dị ka azọrọ na-aga, "Si na ochie, na ohuru." Ezie na ụfọdụ nchịkọta na-agwụsị na ndokwa, nke ziri ezi na-echekwa nke ọma, ọtụtụ ihe ngosi dị iche iche na-ebelata n'ezie na mmepe mkpụmkpụ. Yabụ, dị nwute, n'okpuru bụ ndepụta nke TELIVISHỌN niile na-egosi nke ị nwere ike ikpughe ọfụma n'afọ a.
Zaghachi na Putlockerykam